Lexus – AutoMyanmar
Lexus LC နဲ့ ၂၀၁၈ Nürburgring မှာဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် TOYOTA GAZOO Racing!
Toyota GAZOO Racing အနေနဲ့ Lexus LC နဲ့ ၂၀၁၈ Nürburgring မှာဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် အကြောင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့နာရီအနည်းငယ်လောက်ကမှကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Nürburgring ပြိုင်ပွဲကတော့နှစ်စဉ်ကျင်းပနေကျ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ မှာကျင်းပမှာကတော့ ၄၆ ကြိမ်မြှောက်ပါ။ ပြိုင်ပွဲဝင်မယ့်ကားတွေက ၂၄ နာရီမရပ်မနားယှဉ်ပြိုင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Nürburgring ၂၄ နာရီပြိုင်ပွဲကိုတော့ ဂျာမနီမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး စတင်မယ့် ရက်အတိအကျကတော့ မေလ ၁၂ ရက်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲက ၂၄ နာရီဖြစ်တာကြောင့် ၁၂ ရက်နေ့ကနေ ၁၃ ရက်နေ့အထိတောက်လျှောက်ဖြစ်သွားမှာပါ။ TOYOTA GAZOO Racing ဟာ “making ever-better cars” ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ကြောင့် Nürburgring ၂၄ နာရီပြိုင်ပွဲ မှာယှဉ်ပြိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ GAZOO Racing အနေနဲ့ Nürburgring ကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကနေစတင် ပြိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုတစ်ကြိမ်အပါအဝင်ဆို ၁၂ ကြိမ်မြှောက်ရှိပါတယ်။ […]
GAZOO Racing, Lexus, Toyota
Lexus company အနေနဲ့ LF-1 Limitless concept ကို ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီလထဲမှာကျင်းပမယ့် motor show မှာပါဝင်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့ကဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Lexus will revealastriking new concept that reflects the next genre in luxury crossover vehicles. Created by the CALTY design studio in Southern California, the Lexus LF-1 Limitless isaflagship crossover that redefines the boundaries of luxury. […]